LOZA VOAJANAHARY : Nanolotra 50 tapitrisa dolara ny Banky iraisam-pirenena
Lelavola 50 tapitrisa dolara no natolotry ny Banky iraisam-pirenena ho an’ny Governemanta malagasy entina hiatrehana ireo loza voajanahary. 17 décembre 2019
Teo aloha, tsy maintsy mandalo dingana maromaro vao afaka misitraka fanampiana avy amin’ ireo mpamatsy vola isika raha sendra ny loza voajanahary, toy ny rivo-doza na andro ratsy ahasimban-javatra betsaka. Ankehitriny kosa, araka izao fanomezan’ny Banky iraisam-pirenena izao, dia 24 ora aorian’ny loza dia efa mivoaka ny fanampiana ho an’ireo traboina. Natao omaly 16 desambra 2019 ny fifanaovan-tsonia izany fifanarahana izany, izay natrehan’ny Filoha Andry Rajoelina tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra.
Ankoatra ny fanohanana ny fitondram-panjakana hiatrika ireo loza voajanahary, izao petra-bola izao dia hiantoka ihany koa ny fametrahana rafi-piahiana ara-tsosialy mba hanafainganana ny fahatongavan’ireo fanampiana eny amin’ireo traboina. Ny Banky iraisam-pirenena dia namerina hatrany ny fanohanany sy ny fahatokisany ny fanatanterahana ny politikam-pampandrosoana napetraky ny Filoham-pirenena. Manamarika izany moa ny famatsiam-bola mitentina 100 tapitrisa dolara, izay efa nomen’izy ireo tamin’ny volana avrily lasa teo, izay namatsiana tetikasa maro eto amin’ny firenena eo amin’ny lafiny angovo, ny fotodrafitrasa, ny fahasalamana, ny sosialy sy ny fanabeazana. Izao fiaraha-miasa izao koa dia manamafy fa efa miverina tanteraka ny fahatokisan’izao tontolo izao an’i Madagasikara na eo amin’ny fampiasam-bola izany na eo amin’ny sehatra hafa.